Indlu yeeNdwendwe iTreme nje isiqingatha seBlock ukuya kwikota - I-Airbnb
Indlu yeeNdwendwe iTreme nje isiqingatha seBlock ukuya kwikota
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguBret
Kutheni urenta igumbi xa unokuqesha indlu encinci kuhambo lwakho oluya eNew Orleans. Eli khaya le-650 sq ft linyathelo nje ukusuka kwikota yaseFransi. Yonke into esuka kwiSitrato saseBourbon, isitalato samaFrentshi, isitrato, i-bikeshare, kunye neSithili soShishino esiseMbindini zonke zihamba nje okufutshane. Indawo yokungena yabucala ngegadi entle. Ifanelekile kwisibini okanye isibini sabahlobo. Umrhumo wokucoca uqukwa kwixabiso lasebusuku. (Ilayisensi yesiXeko: 21-RSTR-16991; iLayisensi yoMsebenzisi: 21-OSTR-16990)
***Amaqela angaphezulu kwabantu aba-2 awayi kuqwalaselwa kwaye aya kujikiswa ekufikeni kwawo. Kuphela ziindwendwe ezidweliswe kolu gcino ezivumelekileyo kwipropathi.*** Indlu yethu yeendwendwe ibekwe ngasemva kwipropati yethu. Kuqikelelwa ukuba yakhiwe ngo-1837 (umhla ofanayo kunye nendlu enkulu), le ndawo iye yadlula inguqu epheleleyo. Umxube weNew Orleans yanamhlanje kunye nendala ehlanganiswe kwindlu encinci. Kukho iiseti ezisi-8 zeengcango zaseFransi, kunye neeseti ezi-4 zeefestile zecasement, ezivumela indawo ukuba ifakwe kukukhanya kwendalo. Xa imozulu intle kwaye kuvuthuza impepho epholileyo, akukho nto ibhetele kunokuvula zonke iingcango neefestile ukuze ukwazi ukuthabatha zonke izandi ezinikelwa ngummelwane.
Umgangatho osezantsi ligumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi elinendawo egcweleyo yekhitshi egcweleyo (ifriji enobungakanani obugcweleyo enamanzi ebhotile kunye neKeurig enekofu), kunye nesiqithi esishukumayo. Kukwakho iscreen esisicaba seTV eneDVR, HBO, Netflix kunye neAmazon Prime. INetflix kunye nePrime sele zingenile ukuze uzisebenzise. Izinyuko ezijikelezayo zikukhokelela kumgangatho ophezulu apho kukho ibhedi elingana nokumkani, ikhabhathi yokuhamba, igumbi lokuhlambela elibanzi, kunye neesilingi zeenyawo ezili-12 ezinemiqadi eveziweyo. Uyafuna ukuhlala ngaphandle? Hlala kwintendelezo ekwabelwana ngayo okanye ukuba ukhetha ukuba ngasese kukho ipatio yabucala emva kwendlu yeendwendwe.
Amaqela aphezu kwabantu aba-2 akayi kuqwalaselwa (umthetho wesixeko) kwaye aya kujikiswa ekufikeni. Kuphela ziindwendwe ezidweliswe kwindawo ebekiweyo ezivumelekileyo kwipropati. Sihlala kwipropathi kwaye senze inqaku lokuhlangana nazo zonke iindwendwe xa zingena. Ukuchwechwela iindwendwe ezongezelelweyo kwipropathi ayinakwenzeka. Naliphi na ilinge lokwenza oko liya kubangela ukurhoxiswa kogcino.
Indawo yokupaka yindawo yokupaka esitalatweni engathintelwanga kwaye isimahla kumntu wonke. Umrhumo wokucoca ubandakanyiwe kwixabiso lasebusuku ngoko ke kungabikho ntlawulo ifihliweyo eyongezelelweyo xa uhlala nathi.
(Ilayisensi yesiXeko: 21-RSTR-16991; iLayisensi yoMsebenzisi: 21-OSTR-16990)
70" HDTV ene-I-Hulu, I-Apple TV, I-Disney+, I-Amazon Prime Video, intambo yepremiyamu, I-Fire TV, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-HBO Max
4.99 · Izimvo eziyi-462
I-Treme yindawo emangalisayo kwaye yahlukile ngokungafaniyo nayo nayiphi na enye e-United States. I-St Augustine Church ikwikona, ekhokelela kwimingcwabo emininzi yeJazz kunye neMigca yesiBini. Icawe ikwanoMthendeleko omangalisayo wangeCawa ovuleleke kuluntu. Njengoko umtshana omncinci wathi, "Ayisiyiyo ngokwenene iMisa yangeCawa, yikonsathi!" AmaIndiya aseMardi Gras ahlala ezulazula ebumelwaneni, kunye namaqela omculo obhedu, iimvumi, kunye namakhwenkwe amabini eenkomo ahlala ehamba iillama zawo, amahashe aseShetland, kunye neebhokhwe. Kusoloko kukho into eyenzekayo kwaye abantu baselumelwaneni banobuhlobo kwaye bayathetha. Unokufunda okuninzi malunga neNew Orleans kubantu basesitalatweni kwi-Treme njengoko unakho kunye nomkhokeli wezokhenketho ukuhlawulisa ingalo kunye nomlenze ukuhamba ngeenxa zonke kwikota.
Umbuki zindwendwe ngu- Bret
Abanini bepropati (mna kunye neqabane lam uBrad) bahlala ixesha elizeleyo kwisakhiwo. Siyayithanda iNew Orleans kwaye siyakuthanda ukukwazi ukwabelana nabanye ngayo. Soloko up for incoko elungileyo, ubusuku ngaphandle isidlo kunye neziselo, kwaye kunjalo iintetho ezinde malunga LSU/Saints football.
Abanini bepropati (mna kunye neqabane lam uBrad) bahlala ixesha elizeleyo kwisakhiwo. Siyayithanda iNew Orleans kwaye siyakuthanda ukukwazi ukwabelana nabanye ngayo. Soloko up for…
Inombolo yomthetho: 20-RSTR-30388 Operator License 19OSTR-27023